Ireto mpivady vao koa nanatanteraka ny volan-tanteliny tamin’ny faritra maro tahaka an’i Mandritsara izay fiavian’ilay tovovavy, Antsohihy, Boriziny, Mahajanga. Voahaja natokana efitra fandriana tsara hatrany izy sy ilay tovovavy nandritra ny roa herinandro tamin’ireo fianakavian-drazazavavy notsidihiny. Araka ny resaka tamin’ny zandarimariam-pirenena any Port-Bergé dia manaja vinanto lahy, indrindra ireo miaramila tahaka ity iny faritra iny.
Nisy fotoana tonga saina tampoka ny rain’ilay zazavavy, manoloana ireo fampanantenana goavana nataon’ny vinantony, toy ny fanaovana trano vato sy fanomezana harena maro ka niantso ny tany Maintirano izay nilazany fa lehiben’ny kaompania any izy. Nilaza avy hatrany ilay tena tompon’andraikitra voalohany any an-toerana fa ny tenany tsy niala velively tany fa mpisandoka izany. Tao Port-Berger no tsikaritr’ilay rahalahin’ny rain-drazazavavy ireto mpivady vao ka nampandre ny mpitandro filaminana avy hatrany izy.
Ny atoandron'ny 25 aogositra no nahazo io vaovao io ny zandary ao Mandritsara. Heno fa mandalo ao Boriziny ilay olona miaraka amin'ilay zazavavy sy lehilahy iray hafa. Nidina teny ifotony ny Zandary ka noraisim-potsiny ireo mpisandoka izay nanao fanamiana miaramila. Notanana vonjimaika ao am-ponja ireo roalahy rehefa vita ny famotorana. Ilay zazavavy kosa dia natao vavolombelon'ny fisandohana natao azy.